China Penzura fekitori uye vagadziri | SJJ
Ita zvekunyora kana kudhirowa. Zvese zvinhu zvinoshandiswa pamapenzura akanaka, penzura dzeunicorn, penzura yekabhoni uye penzura dzakasiyana siyana zvine hunyanzvi, zvakachengeteka kuvana & zvinogona kusangana nemhando dzakasiyana dzekuyedza.
Penzura chishandiso chemaoko chekunyora kana kudhirowa, kazhinji pabepa. Mazhinji mapenzura matanda akagadzirwa neiyo graphite hupfu yakasanganiswa neyevhu bhainda iyo iri nyore kudzima. Iyo yakajairika penzura liners matete matanda, kazhinji anotenderera, akaenzana mune muchinjikwa-chikamu, asi dzimwe nguva cylindrical kana mativi matatu. Iyo yekunze casing inogona kugadzirwa nezvimwe zvinhu, senge plastiki, kudirana kana bepa. Kuti ushandise penzura, bhokisi racho rinofanira kuvezwa kana kubviswa kuti ifumure kupera kunoshanda kweiyo sosi yakapinza yekuti vanhu vataure ivo pachavo.
Penzura chishandiso chiri nyore asi chinoshamisa chakabata ruoko chinosangana nezvido zvemuhofisi yako uye nekudzidza nekutenda kune yaro mitsetse yakasviba mitsara. HB penzurandiwo muyero wekunyora zuva nezuva. Iwe unogona zvakare kugadzira akasiyana mamakisi emutobvu kune akasiyana zvido uye nekuvaka kana kuodha yako yakanaka penzura mune yakawanda yemhando yemisanganiswa inosanganisa inosanganisira imwe tambo yezvinyorwa uye akawanda mafonti. Kunze kwepenzura mashandisirwo anoshanda, unogona kuisa logo yako yekusimudzira kana kushambadza bhurandi rako pamutengo wakaderera, ndapota zorora uve nechokwadi chekuti zvakasara graphite kubva padanda repenzura haina chepfu, uye graphite haina kukuvadza kana ikadyiwa, vanhu vanoziva kana vasingazive vanochengeta iwe mupfungwa paunenge uchishandisa, saka zviri pachena kuti ichi chichava chimwe chezvakanakisa chinhu chekusimudzira kusarudza.
Yakagadzirwa nebasswood, graphite yekuzadza. Iwo mabrushstrokes akaomesesa anodonha-asingagadzirike uye ari nyore kuchenesa.
Lead mamaki: Akanyorwa kubva akapfava kusvika akaomesesa: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, uye 9H.
Satin-inotsvedza kupera kwechengetedzo, kugadzikana kubata
Sarudzo dzezvinhu: Penzura dzeGrafiti，Solid graphite mapenzura，Liquid graphite mapenzura，Marasha penzura，Penzura dzeCarbon，Penzura dzine mavara，Penzura mafuta，Watercolor penzura
Maumbirwo esarudzo: Triangular, Hexagonal, Round, Bendable
Yakakodzera kwazvo zvipo zvekusimudzira, zviyeuchidzo, zvipo zvekuzvarwa, nezvimwewo Zvakakura kuzvikoro, dzimba, uye hofisi.
Pashure: Silicone Vamwe
tsika inogadzira mapenzura
Zvipfuyo ID Matagi